Kuthetha ntoni ukuphupha isekethe emfutshane? Fumanisa i-Intanethi ▷ ➡️ kwi-Intanethi
Iimvakalelo zilawula ubomi babantu, oko kukuthi, okwam, okwakho, kunye nawo wonke umntu, kodwa ngendlela eyahlukileyo. Ukuphupha ngesekethe emfutshane luphawu lokuba ubudlelwane ebomini bakho abulunganga kwaye kufuneka boyiswe kwakamsinya.
Inye kuphela indlela yokwenza: qonda uxanduva lwakho kwaye uzame ukwenza eyakho indima. Ukongeza, ayikho enye indlela yokoyisa kwaye kubalulekile ukuba umntu athathe inyathelo lokuqala, ukuya kwisisombululo.
Iphupha alinatoliko linzima kwaye kufuneka kuphela ukuba nezimo zengqondo ezimbini ezilula: khumbula umxholo kwaye uhambelane neemeko eziqhelekileyo. Kungekudala emva koko, kuphela yingcebiso enikiweyo elandelwayo kwaye isisombululo siyafumaneka.
1 Ukuphupha isekethe emfutshane: Kuthetha ntoni?
2 Ukuphupha ngesiphaluka esifutshane esivutha umlilo
3 Iphupha malunga nesekethe emfutshane
4 Ukuphupha ngesiphaluka esifutshane kwishawari
5 Phupha malunga nesekethe emfutshane yombane
6 Phupha malunga nesekethe emfutshane kwipali
7 Iphupha NgePlagi efutshane
Ukuphupha isekethe emfutshane: Kuthetha ntoni?
Okokuqala, isekethe esifutshane sisiganeko esiqhelekileyo kwaye senzeka xa iintambo zombane zisengxakini. Ukwehla kwenzeka nakwiphupha lakho kwaye kunxulumene nobudlelwane ebomini bakho.
Umbuzo omkhulu kukuqonda ukuba ubhekisa kuwo onke amabakala obomi bakho, umzekelo: usapho, uthando, umsebenzi, ngokwakho, izihlobo kunye nempilo. Ukuphupha ngesekethe emfutshane luphawu lokuba kuya kufuneka uzame ukuphucula ubudlelwane obukhoyo ebomini bakho.
Ekuqaleni, i-altruism yeyona ndlela ilungileyo kwaye yenza iingxaki ezininzi zoyise, kuba icala elinye lifuna unxibelelwano. Emva koko qhubeka nje kwaye ujonge iimeko eziqhelekileyo zeli phupha.
Ukuphupha ngesiphaluka esifutshane esivutha umlilo
Ubudlelwane bosapho abunamandla kwaye "ityala" liwela kuwo wonke umntu, ngaphandle kwakhe nabani na kolu xanduva. Ngendlela efanayo, umfowunelwa makabaleke kule nto kwaye lowo ukhethiweyo ukuba afune umfowunelwa makabe nguye.
Ukuba kunzima, zama "ukugwinya ikratshi lakho" kwaye umamele iimvakalelo zothando, akusekho ezinye. Kwangelo xesha, kulula ukuhlala ngokuvisisana kwaye esona simo sengqondo kukuqalisa unxibelelwano ukuba umntu akakhange akwenze oko ngaphambili.
Iphupha malunga nesekethe emfutshane
Olona luvo lukhoyo luthando kunye nokuphupha kwesekethe emfutshane kubonisa ukuba ubudlelwane bakho bothando abukho sempilweni. Kwakhona, uxanduva ayilolwakho wedwa kwaye uhlalutyo luyimfuneko ukuqonda into enokwenziwa.
Thetha neqabane lakho kwaye usebenzise uvakalelo ukuqonda ukuba yintoni enokuphuculwa okanye hayi. Ke sebenzisa ingxoxo ukulungiselela ukulunga kobudlelwane kwaye akukho ndlela yimbi yokusombulula le ngxaki.
Ukuphupha ngesiphaluka esifutshane kwishawari
Ngaba ukhe wema wacinga ukuba emsebenzini wakho, ngelishwa, izinto azisebenzi kwaye imozulu imbi kakhulu? Ukuba impendulo nguewe, iphupha elo libonisa ukuba imeko yakho yobungcali ifuna ukuphucula ubudlelwane.
Ekuboneni kokuqala, ingcebiso kukuzama ukwenza umsebenzi wakho kwaye uthethe kwiqela ngalinye, kuphela ezo zibalulekileyo. Ukuba kuya kuba nzima, khumbula ukuba umsebenzi uyimfuneko ebomini bakho kwaye kubalulekile ukushiya imozulu elula.
Phupha malunga nesekethe emfutshane yombane
Ubudlelwane kunye nesiqu sakho abuyonto ilungileyo kwaye lixesha lokuzazi. Ngale ndlela, zama ukuhlalutya izimo zengqondo zakho kwaye uqonde ukugqitha, ujonge isisombululo ukuze yonke into iphuculwe.
Ixesha liqabane kwaye liphupha elifutshane lombane libonisa ukuba kunokubakho ukonakala kwangaphakathi kunye nokuqhekeka. Impendulo iza kuza ngokwayo kwaye ngoku lixesha lokufumana isisombululo, ke sukuyishiya kamva.
Phupha malunga nesekethe emfutshane kwipali
Abahlobo bakho bathembekile kwaye bahlala behleli ecaleni kwakho, kodwa uyalubuyisa olu nxibelelwano? Kwakhona, ukuba kunjalo, qhubeka kwaye uqhubeke nokuxabisa yonke into el mundo, kuba yeyona ndlela ilungileyo yokwenza.
Ukuba akunjalo, lixesha lokuba uluqonde uxanduva lwakho kwaye usombulule le ngxaki ngokufuna umfowunelwa. Okokugqibela, kubalulekile ukukhulisa ubuhlobo, oko kukuthi, ukuba ufumana ingqalelo, zama ukubuyisela umnxibelelwano.
Iphupha NgePlagi efutshane
Ingxelo ibonisa ukuba impilo yakhe, ngelishwa, ayisiyonto intle kwaye kufuneka siyoyise le meko. Ekuphela kwendlela efumanekayo, ngokufutshane, kukufumana ugqirha, uku-oda iimvavanyo, kunye nokubonisana nawe.
Nangona iimviwo zokugqibela zingakhange zikhuphe nganye nganye, kuyaboniswa ukuba ulumkile kwaye awenzi mngcipheko. Ngokuqinisekileyo lixesha lokunyamekela eyona nto ixabisekileyo ikhona: impilo yakho.
Iphupha lihle kakhulu, kuba libonisa ukuba kunokwenzeka ukuphucula ubudlelwane nabanye abantu. Ke ngoko, ayithathi lukhulu kwaye yanele ukukhangela, ukuqonda ukuba yintoni enokwenziwa kwaye ekugqibeleni iya kusonjululwa.
Ngokuqinisekileyo ukuphupha isiphaluka esifutshane luphawu lokunika ukuhamba kwiimvakalelo zesidima. Emva kwexesha, abanye baya kuba nethuba lokufunda kwesi simo sengqondo kwaye banokuyisebenzisa ngokunjalo, ukuphucula imeko yonke.